सरकारी थैलीको दुरूपयोग
‘हतपतको काम लतपत’ अर्थात् हतारमा गरिएको काम लथालिंग, भताभुंग हुन्छ भन्ने कुरा आम नेपालीलाई थाहा छ। सरकारी कार्यालयको लथालिंथ र भताभुंग शैली नेपालीका लागि नौलो होइन। पशु सेवा विभागले उपभोक्तालाई
दानमा प्यान ?
रोजगार, आय आर्जन वा कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्ने सबैले स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान लिनुपर्ने सरकारी उर्दी छ। हलोका ड्राइभर र हाइड्रोका सञ्चालन मात्रै होइन अनेक थरी कारोबार गर्ने
मान्छेहरू कुरै नबुझी बर्बराएको सुन्दा धरहराको पारो तातेर आउँछ भन्या। आफ्नो आङको भैंसी जत्रो कमजोरी नदेख्ने अनि अरुलाई गाली गर्ने ? गालीमात्र हो र रिसले मुुर्मुरिने ? आफ्नो कुनै योग्यता,
सरकारमा रहेर पनि सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी दलझैं देखिन्छ संघीय समाजवादी पार्टी। डा. बाबुराम सधंै सरकारको विरोध गर्छन् उनको तर्क सुन्दा लाग्छ सो पार्टी प्रतिपक्षी रै’छ। सोही पार्टीका अर्का नेता उपेन्द्र
सरकार दुई तिहाई बहुमतको अनि इतिहासकै शक्तिशाली भन्या त सरकार भन्दा शक्तिशाली डेंगु देखिया छ। डेंगुराज सवत्र फैलिएसी सरकारले डेंगुको दागागिरी नियन्त्रण गर्न नसक्ने निधो भएको छ। त्यही भएर हो
दुई तिहाई जनतालाई सास्ती दिन होइन नि ल्याएको। आहत भएका जनतालाई राहत दिन पो हो सबैले मिलीजुली दुई तिहाइ मत दिएका। तर त्यसको ठीक विपरीत जनतालाई दुःख दिने काम भइरहनु
दशैं आयो, खाउँला पिउँला, कहाँ पाउँला ? चोरी ल्याउँला… हरेक वर्ष दशैं नजिकिएपछि घन्किन्छ यो बालगीत। यो गीत बालबालिका मात्रै होइन उनका बा आमाका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। फरक
असोज लाग्न लागिसक्यो काठमाडौं शहरतिर फिस्स–फिस्स पानी परिरहेको छ। असार–साउन जस्तो हिलै हिलो। पैदलयात्रीदेखि सवारी यात्रीसम्मलाई उस्तै छ सास्ती, असोजमा त हिलो–मैलो हराएर सफासुग्घर हुन्छ, धूलो पनि उड्दैन भन्या सुन्या
डेंगुको दादागिरी जारी छ। डेंगुकै कारणले रसुवामा समेत एक जनाको मृत्यु भएकाले डेंगुराज अब हिमाल, पहाड अनि तराई सर्वत्र फैलिसकेको छ। लामखुट्टे चिसो र हिमाली क्षेत्रमा पुग्दैन, पाइँदैन भन्ने कुरो
एक वर्षभन्दा अघिदेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगार अब खुला भएको छ। बिहीबार दुवै देशका सरकारी अधिकारीबीच तालमेल मिलेसी नेपाली फेरि मलेसिया जाने बाटो खुला भएको हो। कामदार जाने प्रक्रियाको सबै
टेन्ट कि ट्रेन ?
सरकारलाई छिमेकीसँग सधैं हात फैलाउने बानी पर्या छ। छिमेकमा जाँदा होस् या छिमेकी आउँदा सरकार सधैं निर्धक्क हात फैलाउँछ। कुरो कम्रेड ओली सरकारको मात्र होइन, विगतदेखिका सरकार यस्तै संस्कारमा हुर्किए
एक घर एक उपहार
घर–घरमा ग्यासको पाइप लाइन, चीन र भारतबाट रेल, आफ्नै खानी उत्खनन् गरी तेल यस्तो दाबी ओली सरकारले हालसाल गर्या होइन, अघिल्लो कार्यकालकै हो। अहिलेको कार्यकालको शुरुआतमै पनि यस्तै प्रकृतिको ओली
हजम भएन है मान्याज्यू !
खप्पराँ ल्याएपछि कसैको केही लाग्दोरहेनछ। कसैले नचाहे पनि पदमा पुगिँदोरहेछ न पढ्न पर्ने न त कुरा बुझ्न पर्ने उहिले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै धेरैको भाग्य चम्किएको थियो। त्यो भाग्यविधाता थियो तत्कालीन
परीक्षा र खाल्टाखुल्टी
कहिलेकाहीं कतिपय विजातीय कुराहरू पनि पत्याउनै नसक्ने गरी आफै सजातीय बनिदिँदारहेछन्। तपाईंहरू नै भन्नुहोस् न परीक्षा र खाल्टाखुल्टीको के तालमेल मिल्छ त? तर मिल्यो यहाँ। कुरो एकदमै ताजा हो। एकजना
राजतन्त्रले होइन, डेंगुले च्यालेन्ज
‘सरकारलाई असफल बनाउन देशी–विदेशी तत्व लागि परेका छन्, राजतन्त्रलाई पनि ब्युँत्याउने खेल भइरहेको छ’ दुई तिहाइ बहुमतको भारी भएका सत्ता कित्ताका नेता बेला–बेला यसरी बर्बराइरहन्छन्। बोलीमा साँच्चै दम छ कि
धरहरालाई बुधबार दिनभरका लागि भगवानले पशुभाषा बुझ्ने क्षमता प्रदान गरे। के भन्छन् त राजधानीवासी पशुहरू, सुनौं उनीहरूको बोली जस्ताको त्यस्तैः स्थानः बागमतीको पुल, बल्खु, चक्रपथ। फुर्केः यो अफिस समय आयो
पत्रकारभन्दा बढी पत्रुकार बन्नेहरूको जमात बढिरहेका बेला पत्रकारलाई लगाम लगाउने कुरोले बजार पिट्या छ। पत्रकारितालाई कला, सीपसहितको व्यवसाय पनि भनिन्छ। तर सार्वजनिकभन्दा व्यक्तिगत व्यवसायमा छलाङ मार्ने पत्रुकारले सच्चा र इमानदार
‘पोइल’ जान पाउनु ठूलो कि बीच–बीचमा नाच्नु ठूलो ? आजकी सांसद कोमल ओलीले ‘पोइल जान पाम्’ भनेर तीजको गीत गाएपछि कुनै बेला यति मान्छे झुम्न थालेका थिए कि ‘पोइल जान
जललाई बुझाउने अर्को शब्द हो पानी। ‘पानि’ ह्रस्व लेखियो भने बेठीक, दीर्घ लेखियो भने ठीक। ‘पानीको नी सधैं दीर्घ हुन्छ’ भाषाविद्हरूले यस्तै सिकाए। भाषाका विद्वान्ले सिकाएको कुरो ‘हैन’ भनेर अटेर
मानिसहरू कस्तो नबुझी कुरा गर्छन् भने, धरहरालाई सुन्दै झोक चल्छ। उनीहरू ‘सरकार राजधानीमुखी भयो, काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरलाई वास्तै गर्दैन’ भन्छन्। यस्ता कुरा गर्नेलाई झ्याप्प समाउँदै पश्चिममा नागढुंगा र पूर्वमा सल्लाघारी